प्रवासी नेपाली र राष्ट्रियताप्रतिको मोह
नेपाली पब्लिक सोमबार, जेठ २७, २०७६ १९:५६
- लक्ष्मणराज सत्याल
आजभन्दा ७०–७१ वर्षअघिकै ओखलढुङ्गा हुनुपर्छ, त्यसलाई सम्झेर सिद्धिचरण श्रेष्ठले ‘मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा’ नामको कविता मात्र लेखेनन्, त्यसलाई जीवन्तता पनि दिए। जसका कारणले एसएलसीमा बराबर त्यही कविताको चर्चा गर्न प्रश्न सोधिने गर्थ्यो। ओखलढुङ्गा बुझ्ने र देख्नेले त गजबको भावभंगीमा लेख्ने गर्थे होलान्। नदेख्नेले पनि लहरा, छहरा, पहरा, उकाली, ओराली र रोपाइँमा रोपार बनी हिलोले छ्यापाछ्याप गरी लडीबुडी खेलेकोदेखि मेलापात गरेको चरित्र चित्रण गरेर जसले जति भावाविव्यक्त गरेर मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्यो, त्यसले उत्तीर्ण हुँदा बोर्ड फस्ट वा त्योभन्दा घटी बढी अङ्क प्राप्त गरेर परीक्षामा उत्तीर्ण हुन पाउँथ्यो। तपाईं कल्पना गर्नुस्, ओेखलढुङ्गा सुगम र दुर्गमको हिसाबले आजै पनि के होला र ! त्यसो होइन रहेछ। मानिसले आफ्नोपनलाई कसले कति बुझेको छ, राम्रो देखिने भनेको त्यही रहेछ। त्यहाँका हावा, पानी, माटो र उकाली ओराली त प्रिय रहेछ नि। हेर्नुस् त उपेन्द्र देवकोटाले कुन राष्ट्रको कत्रा कत्रा तालतलाउ देखेको नहोला, आइफेल टावरदेखि ह्वाइट हाउससम्म अवलोकन पनि त गरेकै होला। त्यो सबै आज किन सम्झेनन्? सम्झे त केवल गोर्खाको गाउँ, जहाँ उनको अन्तिम इच्छा थियो– त्यहाँको पानीले घाँटी भिजाउने र खुट्टा सेचन गर्ने। त्यति गर्न उनी हेलिकप्टर चढेर गाउँ पुगे। त्यति नगरी उनको सासै गएन। आखिर मनै त रहेछ पार्वती...। अब मेरो आफ्नै कुरा, प्रकृतिको अनुपम छटा मानिने नायग्राफल २–४ पटक अवलोकन गरिसकेर पनि म मेरै ७ नं. वडाको आफ्नै कुटबहाल, त्यहाँको बुद्ध मन्दिर र पिपल चौतारी त्यहीँ वरपर नै घुमिरहेको हुन्छु। हेर्दा राम्रो लाग्ने एउटा विषय हो, आत्मसात् हुने विषय अर्कै हो। आत्मसात् चाहिँ म मेरै टोलसँग बाहेक अन्यत्र हुनै सकिनँ। मेरो मनमस्तिक त्यहीँ छ, जसलाई मैले स्वीकार गरिन भने म आफू कहिल्यै हुनै सक्दिन।
हाम्रो अमेरिकामा यस्तो, हाम्रो बेलायतमा उस्तो भनेको सुुन्दा मन कुँडिन्छ। अन्ततोगत्वा आम रूपमा राष्ट्रिय झण्डा र बुद्धको मूर्ति राखेकै छन्। सन्तोष अलिकति भए पनि बाँकी छ। राष्ट्रियताको बारेमा अझ केही बुझ्नु छ भने घनश्याम कर्णिकारद्वारा लिखित स्वदेशको सम्झना विदेशको यात्रा पढे पुग्छ।
१४–१५ सालतिरको कुरा हो, एसएलसीमा ‘लुसी ग्रे’ नामक कविता पढ्नुपर्थ्यो। त्यसको सार संक्षेप थियो– लुसी नामक ग्रामीण केटी प्रायः हिउँमै नाचिरहने र रमाइरहने स्वभावकी। कालिकास्थान बस्ने अंग्रेजीका माड्साब हुनुहुन्थ्यो हरिहरनाथ रेग्मी। जे.पी. स्कुलमा पढ्दाखेरीको त्यो उहाँको वाचन र त्यो प्रकृतिको अनुपम वर्णनले हामी विद्यार्थी भावविभोर हुन्थ्यौँ। यो प्रसंग किन जोडेको भने हिउँ भनेको चिसोले जमेको एउटा ढिक्का भनौँ या पहाड भनौँ, त्यो त्यही हो। ग्रामीण त्यो अवोध केटीलाई आफ्नो गाउँको त्यो हिउँको कति मोह थियो होला, अनुमान गर्न सकिँदैन। यही होे आत्मसात् भनेको। चक्रपाणि चालिसेले ‘जननि जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ लेखे। बद्रीनाथ भट्टराईले ‘स्याउ नखाउ’ भनेन्। नासपाती पनि चाख्ने गर भने। जसले जसरी भने पनि आफ्ना गाउँठाउँ नबिर्स भनेका हुन्। हाम्रो संस्कृति अलि फरक ढंगले कता कता चलेको छ कि भन्ने लाग्छ। हाम्रो अमेरिकामा यस्तो, हाम्रो बेलायतमा उस्तो भनेको सुुन्दा मन कुँडिन्छ। अन्ततोगत्वा आम रूपमा राष्ट्रिय झण्डा र बुद्धको मूर्ति राखेकै छन्। सन्तोष अलिकति भए पनि बाँकी छ। राष्ट्रियताको बारेमा अझ केही बुझ्नु छ भने घनश्याम कर्णिकारद्वारा लिखित स्वदेशको सम्झना विदेशको यात्रा पढे पुग्छ। राष्ट्रियता पनि विविध किसिमका हुन्छन्। वर्षमा एक दिन मनाउने यो दिवस राष्ट्रियता दिवसकै रूपमा मनाइन्छ। मन्त्री हैरान भएर भन्नुहुन्छ, श्रीमतीलाई ‘ए भोलि बिहान सातै बजे एउटा दिवस मनाउन जानु छ सम्झाउ है।’ मन्त्री बिहान श्रीमतीलाई निम्तो कार्डमा लेखिएका ठाउँ सोध्नुहुन्छ। श्रीमती भन्छिन्, ‘त्यो कार्ड त मैले फालिसकेँ। छिछि हतारमा मैले कार्ड नै हेर्न भ्याइन। फतफताउँदै मन्त्री निस्के तर पुग्नुपर्ने एक ठाउँ, पुगेछन् अन्यत्रै। यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ मनाउने राष्ट्रियता? विचरा धिमेबाजावालाहरू र पञ्चेबाजाहरू एक घण्टा अगाडि नै पुगिसकेका हुन्छन्।
विदेशमा बस्ने नेपालीसँग राज्यकोषमा भएको सम्पत्तिभन्दा दोब्बर छ। पैसा मात्र होइन, बुद्धि पनि चौबर छ। विद्या, बुद्धि र सम्पत्ति सबै भित्रियो भने ४ पासे राजनीतिज्ञहरूले घाँस खेती गरे हुन्छ। जेटका जेट भरिने गरी विद्या, बुद्धि र सम्पत्ति भित्रियो भने के हुन्छ भन्ने ज्ञान पलाएकैले दोहोरो नागरिकता रोकिएको छ।
राष्ट्रियता भन्ने चिज पनि गजबकै रहेछ। नभई नहुने, बढी भए पोखिने पनि राष्ट्रियता हुन्छ? हिजोआज लालबाबु पण्डितको राष्ट्रियता पोखिने खालको परेकोमा चिन्ता लागिराखेको छ। कम्युनिष्टहरूलाई लाल नै भन्ने गरिन्छ। लाल त हो नै, बाबु पनि बन्ने कोसिस गर्नुस् हाम्रो आग्रह यत्ति हो। तपाईंका राजनीतिक हजुरबुवाहरू भन्नाले बीपीदेखि केपीसम्म, के विद्यार्थी के श्रमिक सबैलाई पार्टीको झण्डा बोक्न विवश बनाए। जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्न लगाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेभन्दा अरू सोच्नै भ्याउनुभएन। विवशताले भासिएका नेपालीहरू आफ्नो वृत्ति विकासका लागि गच्छ–गच्छ लागेकै हुन्। विदेशीले पनि आफ्नै स्वार्थ हेर्ने नै भए। उनीहरूले बस्ने भए इस्टाटस लिएर बस नत्र जहाँ जानु पर्छ जाउ भनी निषेधको राजनीति लिए। आफ्नो देश फर्कौं आजभन्दा भोलि बिग्रँदो अवस्था छ। नफर्कौं अवस्था विपरीत छ। मर्नुभन्दा बौलाउनु सबैले ठीक मान्छन्। यी नेपालीलाई भूतपूर्व भन्नेचाहिँ अभूतपूर्व नेपाली होइनन्? आउनुहोस् २४ घण्टा बहस गराैँ। को ठीक को बेठीक सार्वजनिक गराैँ। तपाईंको राष्ट्रियताले अर्को बाटो नलिओस्, मेरो आग्रह यत्ति हो। तपाईंलगायतका मतियारहरूले दोहोरो नागरिकताको विषयलाई किन ओझेलमा पारेका छौ? हामी राम्रैसँग बुझ्छाैँ। विदेशमा बस्ने नेपालीसँग राज्यकोषमा भएको सम्पत्तिभन्दा दोब्बर छ। पैसा मात्र होइन, बुद्धि पनि चौबर छ। विद्या, बुद्धि र सम्पत्ति सबै भित्रियो भने ४ पासे राजनीतिज्ञहरूले घाँस खेती गरे हुन्छ। जेटका जेट भरिने गरी विद्या, बुद्धि र सम्पत्ति भित्रियो भने के हुन्छ भन्ने ज्ञान पलाएकैले दोहोरो नागरिकता रोकिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा नाम लिएर कसैको प्यारो हुन चाहन्न। अहिले २–४ जना यत्रतत्र हुँदा त तपाईंहरू त्रसित हुनुहुन्छ भने हुलका हुल हुँदा के होला? तपाईंहरूको डर नेपाल राम्रोसँग बन्यो भन्ने लाग्ला हाम्रो खाने बाटो के?
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६ १९:५६